Daawo: Maxay tahay sababta maanta Villa Somalia loogu casuumay warbaahinta? - Caasimada Online
Home Warar Daawo: Maxay tahay sababta maanta Villa Somalia loogu casuumay warbaahinta?
Daawo: Maxay tahay sababta maanta Villa Somalia loogu casuumay warbaahinta?
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxtooyada Soomaaliya ayaa galabta ku martiqaadday weriyeyaal ka tirsan warbaahinta gaarka loo leeyahay shir-saxaafadeed ku saabsan xaaladda guud ee dalka iyo waxyaabihii u qabsoomay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud muddada uu xafiiska joogay.
Weriyaasha ayaa Afhayeenka Madxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar, hordhigay weydiimo ku saabsan abaaraha, ammaanka iyo su’aalo quseeyay siyaasadda oo uu mid mid uga jawaab celiyay.
“Qorshaheenna warbaahineed waxaa ka mid ah in si joogto ah aan bulshada ula wadaagno xogta iyo xaaladaha soo kordha ee dalka, waxaa noo qorsheysan inaan si joogto ah bulshada ula hadalno oo uga haqab tirno xogta qaran ee la wada leeyahay,” ayuu yiri afhayeenka madaxweynaha Cabdikariin Cali Kaar.
Weriyaasha maanta tegay madaxtooyada ayaa afhayeenka weydiiyey su’aalihii ay qabeen halka isaguna uu uga jawaabay, iyadoo su’aalaha inta ugu baday ay ka imaanayeen dhinacyada amniga, abaaraha iyo xog siinta warbaahinta.
Kulankaan ayaa imaanaya iyadoo maalmo ka hor ay cabasho xoog leh kasoo yeertay warbaahinta madaxa banaan oo ku dooday in lagu casuumay magacaabaidii Ra’iisul Wasaaraha, balse balantii looga baxay.